“MAAFIA“ Arurineysa Dhallinyaro Soomaaliyeed oo u Dagaalama Qadaafi (Xog) | KEYDMEDIA ONLINE
“MAAFIA“ Arurineysa Dhallinyaro Soomaaliyeed oo u Dagaalama Qadaafi (Xog)
Muqdisho (keydmedia) - Iyadoo ay sii kululaanayaan dagaalada u dhexeeya ciidamada daacadda u ah Madaxweynaha Liibiya Mucamaral Qadaafi iyo xoogaga mucaaradka, ayaa waxa soo baxaya warar kala duwan oo sheegaya dad shisheeye ah oo dagaaladaas ka qayb galaya.
Magaalada Muqdisho ee caasimada Somaliya, ayaa maalmihii u dambeeyay waxa lagu arkayay rag Somali ah oo ka yimid magaalada Tiripoli ee dalka Liibiya kuwaas oo xiriir la leh dawladda Mucamaral Qadaafi, waxaanay raggaasi sida la sheegayo ay Muqdisho ka ururinayaan dhallinyaro dagaaladaas ka qayb qaadata.
Raggan dilaaliiinta ah ayaa la sheegay inay magaalada Muqdisho ka ururinayaan dhallinyaro lagu khaldanayo in loo dhoofin doono dalalka Yurub iyagoo shardi uga dhigay inay marka hore bixiyaan $ 2000 (Laba kun oo Dollar), waxaana dadkaas diyaarad sida la sheegay lagaga qaadayaa Muqdisho, waxaana laga dejinayaa magaalada Tiripoli ee caasimadda Liibiya.
Raggani waxay ku doodayaan in marka dhalinyaradaas ay Libiya ka degaan ay rag kale oo halkaas ku sugayaan ee kaxayn doonaan saarina doonaan maraakiib Yurub u socota. Laakiin dadka Muqdisho qaarkood ayaa shaki ka muujiyay sheegashada raggan, waxaanay idaacadaha Muqdisho baahiyeen barnaamijiyo ay ugu digayaan dhalinyarada deegaanadaas.
Warar Keydmedia ee heshay ayaa waxey sheegayan inay Ciidamada AMISOM arrimahan ku lug leedahay, maadaama ay dawladda Liibiya xiriir la leedahay dawladda Ugaandha ,hormuud ka ah hawlgalada AMISOM iyo Arimo kale oo ey ka mid yihiin inaey dhinaca Dowlada ka soo horjeeda ey ka iibiso Hubka (Faahfaahin Fillo mar dhaw).
Waxa la ogyahay inuu Madaxweyne Qadaafi dalal badan oo Afrika ah ka urursaday calooshood u shaqaystayaal maamulkiisa difaaca, kuwaas oo diyaarado lagaga daabulay deeganadooda, waxaanay halis ba’ani soo food saartay dadka Somalida ah ee Liibiya degen ka dib markii ay kooxaha mucaaradku baahiyeen warar sheegaya inay Somalidu qayb ka tahay dagaalada lagu difaacayo xukunka Mucamaral Qadaafi.